ရိုးမဘဏ်နှင့် မဟာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းတို့ ဘဏ္ဍာရေးပံ့ပိုးမှုသဘောတူညီ
ကြယ်လေး Tuesday, 10 April 2018
ရိုးမဘဏ်နှင့် Maha Agriculture Public Co., Ltd.(မဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအသေး စားချေးငွေလုပ်ငန်း)တို့သည်မြန်မာ နိုင်ငံတွင် မဟာလယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးဆိုင်ရာ အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်း၏ ငွေထုတ်ချေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန် မြန်မာကျပ်ငွေ ၃ ဒသမ ၅ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၆ သန်း) တန်ဖိုးရှိ ငွေကြေးသဘော တူညီချက်တစ်ရပ်ကို ယခုအခါ အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ် ကြောင်းယနေ့ကြေညာလိုက်သည်။
ယင်းသဘောတူညီမှုအရသမား ရိုးကျ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ လက်လှမ်းမမီနိုင်သောနေရာရှိလယ် ယာလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၆ဝဝဝ ကျော်ကို ထပ်မံ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းသည် လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း လယ်ယာလုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ထောင် စုပေါင်း ၁ဝဝဝဝကျော်ကို ဝန် ဆောင်မှုပေးနေပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ခုနစ်ဘီလီယံ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ဒသမ၃သန်း)ကို ထုတ်ချေးပေး နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မဟာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ အသေးစားချေးငွေလုပ် ငန်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သူMr. Matteo Marinelli က ''လယ်သမားတော်တော်များ များဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ငွေ ထုတ်ချေးပေးနိုင်တဲ့ သူတွေဆီကို လက်လှမ်းမီဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်း ပါးပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေခြင်းက အတိုးနှုန်းမြင့်မားတဲ့ တရားမဝင် ငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဆီ ကနေ ငွေကြေးရယူလာအောင်၊ ရရှိမယ့်အမြတ်ငွေ လျော့နည်းသွား အောင်တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေ ပါတယ်။ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုး တက်လာဖို့နဲ့ ဝင်ငွေတိုးလာဖို့လို အပ်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှုတွေကို လယ်သမားတွေ၊ အသေးစား လုပ်ငန်းတွေ၊ ဈေးရောင်းသူတွေဆီ ပေးအပ်ပြီးပမာဏနည်းတဲ့အပေါင် ပစ္စည်းမလိုတဲ့ချေးငွေထုတ်ချေးမှုတွေ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နုိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်''ဟုပြောသည်။
ရိုးမဘဏ်မှယခုဘဏ္ဍာရေး ကူညီမှုသည် မဟာလယ်ယာစိုက် ပျိုးရေးဆိုင်ရာအသေးစားငွေချေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက် ပျိုးရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ဓာတ် မြေသြဇာနှင့် မျိုးစေ့များဝယ်ယူ ခြင်း အစရှိသော တောင်သူလယ် သမားများအတွက် လိုအပ်သော ရင်းနှီးငွေများပေးအပ်ခြင်း၊ အသေး စားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၄င်းတို့လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
''မြေနှင့် အဆောက်အအုံကို အာမခံအဖြစ်မယူဘဲငွေကြေးထုတ် ချေးပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် လယ်သမား တွေအတွက် အသေးစားချေးငွေ ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ကောင်းစွာရယူအသုံးချနိုင်အောင် ဘဏ္ဍာရေးကူညီပံ့ပိုးမှုကိုရိုးမဘဏ် က ဖန်တီးပေးလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါ တယ်။ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းအကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့ အပြင်ရေရှည်မှာနိုင်ငံအတွင်းဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုလျှော့ချပေးပြီး မြန်မာ့ ကျေးလက်ဒေသရှိ လူနေမှုအသိုင်း အဝိုင်းနဲ့လယ်သမားမိသားစုဝင် တွေကိုပိုပြီးကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်''ဟု ရိုးမဘဏ်၏Special Advisor to Chairman & CEO ဖြစ်သူMr. Hal Bosher ကလည်း ပြောသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ(The Livelihood and Food Security Trust Fund)အဖွဲ့ကကူညီထောက် ပံ့ပေးသော ရိုးမဘဏ်နှင့်အတူ ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်သည့်Agribusiness Finance Program ၏ Credit Risk Consultant ဖြစ်သူTeun van Vlerken ၏ ပြောကြားချက်အရMFI၏ Product သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘဏ်များ အကြားတွင် ချေးငွေထုတ်ချေးမှု စံချိန်စံညွှန်းအသစ်ကို ချမှတ်ပေး သည်။
''ဒါဟာ ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်မှုမျိုး ကို MFIလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ကို ကတိပေးတယ်ဆိုတာထက် ငွေချေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုသုံးပြီး သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ ငွေကြေးအဝင် အထွက်လည်ပတ်မှုပုံစံကို လုပ် ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ မြေနဲ့ အဆောက်အအုံစတဲ့ အာမခံထား ရတဲ့ လိုအပ်ချက်ကန့်သတ်မှုတွေ ကိုလျှော့ချပြီးတာဝန်ယူမှုနှင့်အလုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စနစ်တကျငွေကြေး အဝင်အထွက်အပေါ် အခြေခံတဲ့ ငွေချေးခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးစလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ တွင် ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကို ဖွင့်ပေး တဲ့ အဓိကလမ်းစဖြစ်ပါတယ်'' ဟု Teun van Vlerken က ဆက် လက်ပြောကြားသည်။